IRyuko Park | IHolo yeSikhumbuzo saseRyuko
Malunga neRyuko Park
Indlu endala yakhiwa ngo-1948-54 emva kwemfazwe, kwaye i-atelier, eyasindayo kwibhombu, yakhiwa ngo-10, isikhumbuzo se-1938 sokusekwa kukaSeiryusha.
Ukongeza, uRyuko wenza "iBhombu Sanka noIke" eRyuko Park njengechibi lendawo yokuhlala eyatshatyalaliswa ligqogqo lomoya ekupheleni kwemfazwe.
I-Ryuko Park iya kukhokelwa ngabasebenzi besikhumbuzo ngosuku lokuvula.Ixesha lolwazi ngu-10: 00, 11:00, 14:00 amaxesha amathathu ngosuku.
(Nceda uqaphele ukuba isango livaliwe kwaye awukwazi ukulibona ngokukhululekileyo ngaphandle kwexesha lesikhokelo.)
* Ngokuxhomekeke kwimeko yosulelo losulelo olutsha lwe-coronavirus, isikhokelo esinezimvo siya kurhoxiswa kwaye izimvo ziya kusasazwa, kwaye ukhenketho luya kukhululeka kangangemizuzu engama-30.Nceda qaphela.
Ukuzibophelela kuyilo kunye nobomi
Uyakubona ukuzibophelela kukaRyuko kuyilo, njengendawo yokubonela i-tatami ye-60 ekhethekileyo malunga nokukhanya kwemini, kunye nomgaqo wamatye odityanisiweyo kwisikali njengenamba ebhabha phezulu esibhakabhakeni.
Amatye aqingqiweyo aqhagamshela indlu endala kunye ne-atelier
Imbonakalo yamaxesha onyaka amane
Izityalo zonyaka ezinje ngeplam, iintyatyambo zetsheri, kunye namagqabi ekwindla anemibala yeRyuko Park.Unokuchukumisa umbono kaRyuko wobugcisa, ekuthiwa "kukutyala izinto zokuzoba" egadini.
"Ibhombu Sanka" ichibi kwisizini yeentyatyambo zecherry
Indlu endala kunye neyadi engaphambili ngexesha lamagqabi ekwindla